अबको मुख्यसचिव को ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अबको मुख्यसचिव को ?
पुस २७, २०७६ बलराम बानियाँ
काठमाडौँ — छ महिना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वास प्राप्त सचिव प्रेमकुमार राईलाई मुख्यसचिव बनाउन लागेको चर्चा निकै चलेको थियो । गत साउन २१ मा राईभन्दा वरिष्ठ सचिवत्रय अर्जुनकुमार कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्मा र विष्णु लम्सालले ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनी वरिष्ठताका नाताले समेत मुख्यसचिव हुने बाटो खुलेको मानिएको थियो ।
मुख्यसचिव निजामती प्रशासनका ७१ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई संयोजन गर्ने, सरकारका तर्फबाट निर्देशन दिने तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुन एजेन्डा पेस गर्ने र कुन नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने आकर्षक पद हो । मन्त्रिपरिषद्मा सरकार प्रमुखको निकट भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र व्यक्ति नै हुनुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा ओलीको प्रमुख रोजाइमा राई थिए ।
सरकारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आकर्षक मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरी पद खाली गराएर राईलाई बढुवा गरी निजामती प्रशासनको नेतृत्व सुम्पने तयारीसमेत सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले रेग्मीलाई राजदूत हुने मुलुक रोज्नसमेत आग्रह गरिसकेका थिए । ‘राईको उमेरका कारण पूरै तीन वर्ष मुख्यसचिव नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली राईलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारीबाट पछि हटेका हुन्,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण राई एक वर्षभन्दा कम समय मात्र मुख्यसचिव हुन्थे ।
राईले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी माघ २१ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीसँगै एकै दिन बढुवा भएका सचिवत्रय गजेन्द्रकुमार ठाकुर, रामकुमार आचार्य, राजन खनालले समेत सोही दिन अवकाश पाउने छन् । राईसँगै १७ जना सचिवमा बढुवा भएका थिए । अरूले ५८ वर्षे उमेर अवधि पुगी यसअघि नै अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।
मुख्यसचिव हुने चर्चा सेलाए पनि राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को आकर्षक पद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी आगामी असोज २८ मा अवकाश पाउँदै छन् । राईलाई सचिवबाट अवकाश हुनासाथ सुरुमा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र घिमिरेले अवकाश पाएपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारमा हाल दुई आयुक्त पद रिक्त छन् । राई मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना लगभग सकिएपछि रेग्मीपछि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा को पुग्ला भन्ने चासो उठ्न थालेको छ ।
राई पछाडिको दोस्रो वरीयताका वरिष्ठ सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी, मोहनकृष्ण सापकोटा, महेश दाहाल र शंकर बैरागी छन् । दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी आगामी जेठमा अवकाश पाउँदै छन् । राईसहितका चार जनाले अवकाश पाएपछि मुख्यसचिव रेग्मीलाई बीचैमा कुनै आकर्षक पदमा नियुक्त गरेर पद खाली गराइयो भने अधिकारी, सापकोटा र बैरागीमध्ये एक मुख्यसचिव हुनेछन् । रेग्मीलाई तीनवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअगावै बिदा गरिएन भने यी चार जनाको मुख्यसचिव हुने ढोका बन्द हुनेछ । २०७४ कात्तिक ४ मा मुख्यसचिव नियुक्त रेग्मीको तीनवर्षे पदावधि आगामी कात्तिक ३ मा पूरा हुँदै छ । सचिव अधिकारी, सापकोटा, दाहाल र बैरागीले आगामी असोज २२ मै ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाउने छन् । उनीहरू २०७२ असोज २३ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरूसँग एकै दिन बढुवा भएका अरू ५ जनाले ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।
मुख्यसचिव रेग्मी तीनवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश हुँदा सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे सबभन्दा वरिष्ठका नाताले निजामती प्रशासनको नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार हुनेछन् । उनी २०७२ माघमा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । उनीसँगै बढुवा भएका अरू तीन सचिव शशिशेखर श्रेष्ठ, महेन्द्र गुरुङ र शंकर कोइरालाले ५८ वर्ष पूरा गरी यसअघि नै अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । ‘रेग्मीले तीनवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएका दिन घिमिरे सबभन्दा वरिष्ठ सचिव हुनेछन् । उनीसँगै सचिव भएका अरूले अवकाश पाइसकेका छन् । वरिष्ठका नाताले उनी नै मुख्यसचिव हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । सबभन्दा वरिष्ठ सचिवहरूबाट मुख्यसचिव बनाउने प्रचलन छ ।
सरकारले एकैपटक पदोन्नति भएकामध्येबाट वरिष्ठताक्रम मिचेर मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने गरे पनि पछिल्लो लटका सचिवबाट भने बढुवा गरेको उदाहरण छैन । सरकारले घिमिरेलाई बनाउन चाहेन भने मुख्यसचिवलाई एक महिना पहिल्यै बिदामा पठाएरसमेत अधिकारी, सापकोटा र बैरागीमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउन सक्नेछ ।
प्रकाशित : पुस २७, २०७६ ०७:१४
मुख्यसचिवको घरमै सशस्त्रले पुर्‍याउँछ ट्यांकरको पानी
पुस १७, २०७६ बलराम बानियाँ
काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ट्यांकरमार्फत् मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्ति गरिदिने गरेको पाइएको छ । सशस्त्रले साताको एकपटक राजधानीको कोटेश्वरस्थित रेग्मीको घरमा एक ट्यांकर पानी आपूर्ति गरिदिने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
रेग्मीले सरकारी निकायको ट्यांकरबाट आउने पानी र ढुवानी शुल्क केही तिर्नु पर्दैन।
सशस्त्रले निःशुल्क रूपमा उनलाई अनधिकृत रूपमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको हो। मुख्यसचिव या कुनैपनि प्रशासनिक अधिकारीले सरकारी निकायबाट निःशुल्क रूपमा खानेपानी या अरू सुविधा लिनु आफैंमा कानुन विपरीत हो। ‘कुनै पनि सरकारी अधिकारीले मातहतको या आफ्नो पहुँच भएको कार्यालयबाट अनधिकृत कुनै पनि सुविधा लिन मिल्दैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
‘रेग्मी २०७३ भदौ १९ देखि २०७४ कात्तिक ७ सम्म गृह सचिव हुँदा सशस्त्रका तत्कालीन नेतृत्वले चाकरी स्वरूप साताको एकपटक ट्यांकरबाट पानी लगिदिन थालेको हो। रेग्मी मुख्यसचिवमा बढुवा भएपछि पनि यो चाकरी गर्दै ट्यांकरबाट पानी पुर्‍याउने सेवाको क्रम जारी छ’ सशस्त्रको एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने।
बिहीबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका जवान र चालकले बा १ झ ३५९६ नं. को ट्यांकरबाट पाइपको सहायताले रेग्मीको घरको खानेपानी ट्यांकीमा पानी हालिरहेको भेटिएका थिए। ‘मुख्यालय र गणहरूलाई पानी आवश्यक पर्दा ओसार्नका लागि सशस्त्रले ट्यांकर खरिद गरेको हो।
ती ट्यांकरको दुरुपयोग गर्दै सशस्त्रको नेतृत्व र माथिल्लो तहका अधिकारीले मुख्यसचिव रेग्मीसहित आफूले चाकरी गर्नु पर्ने अरू ठूलाबडाका घरमा समेत पानी पुर्‍याइदिने गरेको छ’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो– ‘सशस्त्रले आफ्नै बजेटबाट चालक, सहयोगी, इन्धनलगायतका सबै खर्च बेहोर्छ, ठूलाबडाले कुनै खर्च बेहोर्नु पर्दैन।’
रेग्मीका छिमेकीमात्र होइन सिंगै राजधानीबासी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले धारामा हप्तामा एकपटक दिने अपुग पानीले चित्त बुझाउन बाध्य छन्। धारामा आउने पानीले नपुगे राजधानीबासी निजी ट्यांकरबाट पैसा तिरेर ल्याउन बाध्य छन्।
सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता अजयकुमार छत्कुलीले आफ्नो संगठनको ट्यांकरले मुख्यसचिवको घरमा बिहीबार पानी पुर्‍याएको स्वीकार गरे। ‘अप्ठ्यारो पर्दा र खानेपानीको अभाव हुँदा सशस्त्रको ट्यांकरले टोलटोलमा पानी वितरण गर्ने गरेको छ। यो सामान्य कुरा हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने। उनले सशस्त्रको ट्यांकरले मुख्यसचिवको घरमा पानी पुर्‍याउँदा उनका अरू टोलबासी र अन्यत्र किन नदिएको भन्नेबारेमा भने बोल्न चाहेनन्।
प्रकाशित : पुस १७, २०७६ २०:०३